MAYELANA NATHI - Isela Ercolani UMontepulciano
Inkampani yezolimo Ercolani
Umlando womndeni kusukela ngo-1940 Ercolani iyindaba yabantu abahamba ngamaselula nabanqobayo, izitolo nezifiso.
Yindaba yalabo abathanda umhlaba wabo nezwe labo liyazi izimfihlo, bayalazisa amakha, banambitha ukunambitheka.
Ipulazi leCantine Ercolani wazalwa ngonyaka we-1988 eMontepulciano, enhliziyweni yeTuscany emnandi lapho isivele ikhona kumkhulu omkhulu ka-40s Ercolani wayethanda futhi ehlakulela ubuciko bepishi.
Umkhulu uSergio ngeminyaka yo-60 wadlulisela phambili uthando lwendawo nengcebo yayo ukubeka izisekelo zebhizinisi lanamuhla.
IPorta di Bacco iyavula, indawo yokudlela yokuqala yakhelwe manje ezungeze iVino Nobile di Montepulciano, i-vinsanto, uwoyela nokuthengiswa kwe-salami ejwayelekile, ephepheni eliphuzi kuphela. Ngokuhamba kwesikhathi inkampani iyakhula, ithenge umhlaba omusha, inwebise imibono yakho futhi uqinise abasebenzi; ukuzibophezela ekuthembekeni kuhlala kungaguquguquki, ubuqiniso bezinto ezisetshenzisiwe, izinqubo zokutshala nokulungisa kanye nokudla kwendabuko. Kuze kube manje ipulazi Ercolani thembela enhlanganweni eqinile. Ingcweti yabasebenzi ibhekene nokulungiswa kwamahektha angaba ngu-150 omhlaba, izitshalo, amasimu ama-truffle, izivini, iminqumo, amapulazi wezimvu nokuthengisa okuqondile.
Ifulegi lenkampani yi- Ngaphansi Kwedolobha obhekene nokukhiqizwa, ukuguqulwa, ukuthengiswa nokunambitha kwemikhiqizo kuphela ehlobene nensimu yePoliziano efana ne-Nobile di Montepulciano iwayini, i-vinsanto DOC, i-grappas, i-olive olive oil, i-pecorino, i-salami, i-jams, uju kanye ne-truffles entsha.
Woza ukwazi nathi
Isisekelo sokuzalwa kwezinsimbi zamaselula nabanqobayo futhi esivela ekunikezelweni kwamehlo kwalabo abakholelwa emandleni wensimu yaseTuscan emnandi, ipulazi Ercolani namuhla kuyiphuzu elihlonishwayo lesethenjwa lokukhiqiza, ukuguqulwa kanye nokuthengiswa okuqondile kwemikhiqizo yesiko lamaPolizi.
Isibopho esingahlukaniseki ukuthi umndeni Ercolani selukiwe nomhlaba waso ugcwala yonke inqubo yethebula lokukhiqiza: izivini, izihlahla zomnqumo, ukuvikelwa kwezindawo ezinobunzima, ukutshala okusanhlamvu, izihlahla zezithelo, izimvu, ingulube namapulazi enziwe ngezinyosi, ukukhiqizwa kwepecorino, isalami ejwayelekile, uju, uwoyela uwoyela owengeziwe we-olive, i-pasta, i-jams, ama-truffles; ukuguga kwewayini emiphongweni ye-oki.
Ngaphakathi kwedolobha elingaphansi komhlaba, umndeni Ercolani inikeza izinsizakalo ezilandelayo:
iphuzu lokuthengisa eliqondile lemikhiqizo yenkampani
ukunambitheka kweVino Nobile di Montepulciano, i-grappa ne-vinsanti DOC kanye nokunambitheka kwemikhiqizo yenkampani okunikezwe ezindaweni zokuthengisa zamapishi
ukunambitha okukhokhelwe amaqembu noma abantu ngokubhuka ngokuzikhethela okwenziwe inyama, ushizi, uwoyela newayini
ukuvakasha okuqondisiwe kwedolobha elingaphansi komhlaba
ukulungiswa kwamabhasikidi namabhokisi esipho
uhambo oluzayo lokufuna ama-truffles
imisebenzi yokubamba iqhaza ngesikhathi sokuvuna
ukuhambisana nemisebenzi emaphandleni nokuhambela izinkundla zenkampani